China Face mask KN95 musoro-yakaiswa fekitori uye vagadziri | Gubang
Kumeso kwemaski KN95 musoro-wakaiswa
Iyo mask yepasi inovhara chirebvu.
Sefa inokwana 95% yezvimedu zvemhepo.
Ultrasonic welding tekinoroji, glue-isina uye isinganhuhwi
Kuchengetedza uye Kuchengetedza
1. Geza maoko ako usati wapfeka mask, kana kuti dzivisa kubata rutivi rwemukati rwemask paunenge wakapfeka mask kuti uderedze mukana wekusvibiswa kwemask.
Kusiyanisa mukati nekunze, kumusoro uye pasi kwemaski.
2. Usasvina mask nemaoko ako. N95 masks inogona kungoparadzanisa hutachiona pamusoro pemask. Kana iwe ukasvina maski nemaoko ako, hutachiona huchanyura kuburikidza nemasikisi nemadonhwe, izvo zvinozokonzera nyore hutachiona hwehutachiona.
3. Edza kuita kuti masikisi ienderane zvakanaka nechiso. Iyo yakapfava yekuyedza nzira ndeye: Mushure mekupfeka mask, femera nesimba kuti mweya usabude kubva kumucheto kwemask.
4. Chifukidzo chekudzivirira chinofanira kunge chiri pedyo nechiso chemushandisi. Mushandisi anofanira kuveura ndebvu kuti ave nechokwadi chekuti mask inonyatsoenderana nechiso. Ndebvu uye chero chinhu chakaiswa pakati pemask gasket nechiso chinokonzeresa kuti mask ibvire.
5. Mushure mekugadzirisa nzvimbo yemasikisi maererano nechimiro chechiso chako, shandisa zvigunwe zvemaoko maviri kuti utsikidze mhino yemhino pamwe nepamusoro pemucheto wepamusoro wemasikisi kuti uite pedyo nechiso.
Inosefa inosvika 95% yezvimedu, ichipa premium dziviriro kubva kumhepo zvimedu, kusvibiswa uye guruva.
High-elastic tambo dzinoita kuti snug fit.
Zviri nyore kupeta uye kutakura pamwe chete newe.
Yakagadzirwa kubva kune yakasununguka, kumeso-inoshamwaridzika zvinhu.
Iyo KN95 ndeye advanced inodzivirira mask inokwanisa kusefa kusvika 95% yeasina mafuta particles mumhepo. Izvi zvinosanganisira huruva uye chiverengero chezvimwe zvinhu zvinotakurwa nemhepo.
Iyo mask yakagadzirirwa kukudzivirira kubva kune zvinogona kukuvadza zvinhu mumhepo uye kuve nechokwadi chekuti unofema mumhepo yakachena. Inouya 10 zvidimbu mupakiti.
Iyo KN95 inosefa ishoma ye95% yezvimedu zvinowira muhuwandu hwe0.3 microns uye pamusoro. Iyo inogadzira iyo N95 mask yakanyora kuburikidza nekamuri yavo yenhau kuti iyo KN95 mask ndiyo yakanaka imwe nzira. Inoumba chisimbiso kana ichivhara mhino nemuromo zvakanaka zvekudzikisa njodzi yehutachiona.
Zvakapfuura: Pazasi mutengo Ce Kn95 - Kumeso mask KS-9005 - Gubang
Zvinotevera: Face mask KN95 ine vharafu